Kedu ihe bụ nsogbu nitrogen, gịnị kpatara ndị ọrụ ugbo ji eme mkpesa na gịnị kpatara mbelata ọsọ ọsọ? : Martin Vrijland
Ọ dị ka ọ bụ ezigbo ihe otiti! Ndi oru ugbo niile choro belata nitrogen. Okwu ahụ '' nitrogen 'enweworị okwu okwu' subọchị 'n'ime onwe ya ya mere nke a na-eme ka nkezi nwoke nọ n'okporo ụzọ chee na anyị na-emeso otu ihe anyị niile ga-eme nkụ. Eleghị anya ọtụtụ na-ejikọ okwu ahụ na CO2 na amaghị ọdịiche ahụ. Nitrogen bu ihe mbuwara na okike. Ya mere okwu a ‘nitrogen’ putara na atom nke puru ime n’udi ihe eji eme ya. Ọ bụ ya mere, dịka onye ọrụ ubi, ịnweghị ike belata nitrogen. Nwere ike, dịka ọmụmaatụ, belata amonia. Amamịghe NHiaa bụ nke a pụrụ ịta etu n’ezie achọta ya, dịka ọmụmaatụ, n’ime oke ehi. Na steeti chọrọ ime ihe banyere iwelata nitrogen bụ n'ụzọ bụ isi nhọrọ NLP (Neuro Linguistic Programming) ịhọrọ ndị mmadụ na ọkwa ala. Mbelata Nitrogen pụtara n'ezie ihe ọlị. Kedu ihe ị belata ikuku gas, amonia of otu n'ime ọtụtụ ihe ndị ọzọ na nke mmewere nitrogen pụtara?
isi mmalite: indiamart.com
Eleghị anya ị maara nitrogen kachasị mma na ihe ahụ dị na nnukwu nsogbu na karama ị ga-awụfu ya na nnukwu aka (ma ọ bụ dị ka foto site na karama echekwara), n'ihi na ma ọ bụghị mkpịsị aka gị ga-ajụ: ikuku gas (N2). Ejiri nke a dịka ọmụmaatụ iji wepu waatị. Ozugbo nitrogen pụta na karama mgbali elu, ọ na-amalite ịmịcha ikpu. O nwere otutu okpomoku nke -195,8 Celsius C ma nke ahu bu okpomoku nke nitrogen bu mmiri mmiri. Nitrogen gas dị oyi nke ukwuu ma malite ịmalite ikpu ikuku. Idebe ya n’okpuru nrụgide dị na karama ọla siri ike na-eme ka ọ na-agba mmiri. Nke ahụ bụ iwu anụ ahụ.
Anyị amaralarị na anyị ga-ebelata CO2. CO2 enweghị ihe jikọrọ ya na ikuku gas (N2). CO2 pụtara carbon dioxide. Yabụ na a haziri okwu ahụ dịka nke a: di-oxide nọchiri anya oxygen 2x. Atọm carbon na atom abụọ dị na ya. A na-emepụta carbon dioxide site na mmanụ ọkụ nke nwere atom carbon. Mmanụ, kerosene na mmanụ dizel nwere carbon atom. Ya mere, mmanụ mejupụtara mmanụ n’ime, na ihe ndị ọzọ, carbon atoms na, mgbe ejiri ọkụ (ikuku, ịbụ gas O2 gas), a na-emepụta CO2 n’ihe gbasara mkpokọta zuru oke na carbon monoxide (CO) nwere ike ibilite ma ọ bụrụ na ikpo ọkụ na-ezughi ezu. Nke ikpeazu na - eme mgbe ụfọdụ nwere ikuku gas n'ụlọ, na - akpata oke mkpọchi. N'ebe ahụ, ị ​​nwekwara ike ịhụ njikọ njikọ dị n'etiti nitrogen na CO2. Chem na uwa n'ezie, ha abua enwechaghi ihe jikotara onwe ha.
Ọ bụrụ na ndị ọrụ ugbo ga-ebelata nitrogen, ha ga-egburịrị ihe nkọwa ya doro anya. Nke a bụ n'ihi na ndị ọrụ ugbo anaghị emepụta ikuku nitrogen. Nitrogen gas bụ gas kachasị dị ọcha ma mejupụtara 78,1% nke ngụkọta ikuku nke ikuku. Rịba ama na atọm ike enwere na okike na njikọta na atọm ndị ọzọ. Dịka atom oxygen (O) naanị ma ọ bụrụ, dịka ọmụmaatụ, ikuku oxygen (O2) ma ọ bụ na mmiri pụtara (H2O). Ihe ndị dị na Nitrogen na-agbarịta ikuku n'etiti ikuku na ihe dị ndụ. A ga-ebu ụzọ dozie Nitrogen ma ọ bụ "dozie" n'ụdị nke nwere ike iji ahịhịa, na-abụkarị amonia. Ọ bụ ndị ọrụ ugbo (ma ọ dịghị ihe ọzọ) ehi ha na-emepụta. Amonia bara uru ma bara uru maka ahịhịa, ọ bụ ya mere ndị ọrụ ugbo ji agbasa fatịlaịza n'ala ha.
Mgbe osisi na-amị amonia, a na-eji ya maka protein. Mgbe ahụ, ụmụ anụmanụ na-eji ihe ndị na-eme ka ihe ndị ahụ na-eme ka ihe ndị dị n'ime mmiri ọgwụ na-eme ka mmiri gbakọọ n'ime ha. N'ikpeazụ, mkpụrụ ndụ ndị a na-anwụ ma na-emebi emebi, na-eme nje na gburugburu oxidation na ịkọ nkọ, na-ahapụ ikuku ikuku n'efu (N2) na ikuku. Ọmarịcha okirikiri bara uru ma dị mkpa.
Dị ka CO2, ọ nweghị ihe ọ bụla na-egbu egbu ma ọ bụ ihe dị ize ndụ banyere ikuku gas. N’ezie, ikuku gas bụ ‘inert’ gas nke sitere na ebum n’enweghi ike ịbanye n ’kemịkalụ na ihe ndị ọzọ. Ọ bụ ya mere adịghị emerụ ahụ, adịghị egbu egbu, enweghi isi, anyị na-eku ume ya ụbọchị niile; dị ka ikuku oxygen. Mkpụrụ oxygen ahụ nke na-amịpụta ọzọ site na osisi dịka nsonaazụ nke CO2. Ha abụọ gas CO2 na nitrogen dị mma ma dị mma gas, na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ugbu a (na ìgwè ndị na-eme ihe ike) na-ekwu na ha dị ize ndụ. Nke a bụ n'ihi na gọọmentị n'ogo ụwa emeela ka ndị sayensị kwe ka akụkọ a bụrụ eziokwu, ebe enweghị ike ịkọwapụta ihe dị ndụ, kemịkal ma ọ bụ nke anụ ahụ. Nkwupụta nke ga-egosi na enwerekwu CO2 n'ikuku n'oge oge dị ọkụ na Earthwa, na-egosi na CO2 bụ nsonaazụ nke ọrụ anyanwụ ma ọ bụghị kpatara ya. Anyị bụ ndị akaebe nke anwansi sayensị iji webata usoro ụtụ isi zuru ụwa ọnụ na sistemụ ebe enwere ike ịchọta ego nke onye ọ bụla (yabụ ego blockchain).
Kemgbe 2015, emeela ka ndi oru ugbo mee ihe na PAS (Nitrogen Approach Program). Anyị na-ahụ ngagharị iwe nke izu ole na ole gara aga n'ihi itinye aka nke chọrọ ihe siri ike ma ọ bụ na-agaghị ekwe omume iji mejuputa ya, nke na-eduga ndị ọrụ ugbo enweghị ego. Eziokwu ahụ Mark Markte nọrọ otu ụbọchị ụnyaahụ na-ege ndị ọrụ ugbo ntị (na-ekwu okwu na-enweghị isi ma na-emeghị ihe ọ bụla) bụ otu ihe ahụ dị ka mmịpụta gas nke Groningen na ala ọma jijiji ndị kpatara: Kwa ugbu a, mgbe ahụ onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-eleta mpempe ya. ka ndi Israel ghawa mmiri. Rutte nwere ike iji obi ike gaa nzukọ ndị ọrụ ugbo dị otú ahụ, ebe ọ maara na steeti Dutch etinyela ego na ọtụtụ afọ na netwọkụ nke pawns n'ọrụ ọ bụla; Ngwakọta nke Inoffizieller Mitarbeiter dị ka ịbụ onye a na-emegide mmegide ọ bụla na ọha mmadụ. Dị ka onye na-eme ihe nkiri nke nwere ike ịkpọ onwe ya 'praịm minista', ọ naghị atụ ụjọ maka mwakpo ọ bụla, n'ihi na ndị ọrụ ugbo ga-eme ka nhụsianya niile dịrị n'etiti ndị a, ha ga-agbachikwa nkịtị.
N’ihi na ịnweghị ike ịmatụta ikuku nitrogen, ọ bụrụ na ịnweghị nkọwa doro anya banyere onye ma ọ bụ ihe na-ebute nitrogen, ị nwere nsogbu. Iji maa atụ, ehi ewepụtara ikuku gas mgbe ọ na - aga ije? Ee e, enwere onyinye nitrogen n’ime mmamịrị na nke ndị ogbenye, mana ehi anaghị ewepụta ikuku nitrogen. Ndị ọrụ ugbo na-eji Nitrogen gas eme ihe mgbe ụfọdụ, dịka ọmụmaatụ iji gbochie uto hay ma ọ bụ iji chekwaa mkpụrụ, mana nke ahụ ekwughi ọtụtụ, na nke ahụ, gas ikuku adịghị mma na ezigbo gas. Ndi oru ugbo aghaghi inweta ihe iji gbakọọ agbako, nke steeti jiri aka ha kpebie na ha ga - eme mmetọ nitrogen. Na njedebe ọ na-amụrụ ihe amonia ya mere maka ihe nọ na nri na mmamịrị. Nitrogen ka bụ okwu a họọrọ maka ebumnuche ndị na-agha ụgha na maka usoro mmegharị anya "na ị ga-emegbu". Gịnị kpatara na ọ bụghị? mmetọ amonia kwuru okwu, anyị na-anụkwa aha mgbe niile na-echetara anyị ịta ahụhụ? Dịka akọwara: nke ahụ bụ ihe anyị kpọrọ 'subliminal programming'.
Atụmatụ ọhụrụ site n'aka ndị na-eme ihe nkiri bụ Hague bụ na a ga-ebelata oke ọsọ n'okporo ụzọ belata. Mgbe ahụ enwere ihe ọzọ gbasara owuwu? Still ka na-enweta ya? O doro anya na a ga-enwe ndị ọrụ ugbo ole na ole, n'ihi na anyị chọrọ inwe ike ịrụ ọtụtụ ụlọ na akụrụngwa, yabụ na a ga-ebelata ọsọ n'okporo ụzọ, n'ihi na steeti nwere ike imefu ijeri mmadụ ole na ole na mmachi okporo ụzọ. Uche ọ bụla na-efu na mkparịta ụka ọ bụla na nke ahụ yiri ka ọ bụ ebumnuche. Enwere naanị okwu eji emetụ ya aka karịa mmetuta ọfụma (mana ọ ka nwere ihe na-ezighi ezi). Ọ bụkwaghị maka ezi uche na ọdịnaya; ihe niile dị n’ụwa nke mgbasa ozi, ndọrọ ndọrọ ọchịchị na gburugburu ebe obibi bụ ihe niile gut mmetụta. Ka ọ dị ugbu a, enwere otu mmetụta na nke ahụ bụ na onye ọ bụla ga-etinye ọtụtụ ego n'ime ya ma ọ bụ naanị (dị ka ndị ọrụ ugbo) na-efu ego.
Shell, know mara ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ nke ezinụlọ eze anyị nwere oke òkè (nke zoro n'azụ ụdị ụlọ ọmarịcha mara mma) malitere na 2009 ogige ka itinye mmanu ya. Nke a ga - abụ ime ka ikuku anwuru dị ọcha. N'ezie, nke ahụ dị ka nke ahụ ma anyị nwere ike ịsị na ndị ụlọ ọrụ mmanụ agbakwunyewo nsogbu ahụ n'ọkụ ahụ. Nsogbu nke gọọmentị Rutte na-anwa ugbu a ịchepụta azịza site na mbelata ọsọ ọsọ ọsọ site na 130 ruo 100 n'okporo ụzọ. André L. Boehman (onye ga - abụzi bogeyman), onye prọfesọ sayensị sayensị, ihe sayensị na injinịa na Mahadum Penn State na New York, ekwuputala na 2009 na New York Times:
A na-eji mmanụ ikuku Nitrogen eme ihe maka oge nwa oge. O kwuru na okwu ahụ bụ "emejupụta akụ na ụba" na-ekwughi ihe ọ bụla nye onye na-amaghị banyere kemịkal nke mgbakwunye. Ihe m jụrụ onwe m dị ka ọkachamara n’ihe banyere mmanụ ọkụ bụ: "Kedu ihe kpatara ha jiri tinyekwuo nitrogen, maka na nke ahụ ga-abawanye mmụba NOx?"
Ihe mgbakwunye nke ogige nwere ihe nwere mmanụ na - akpata ya bụ ihe kpatara ya. A gha achoputa ihe osisa n’ebe ahu: n’ebe ndi n’enye mmanu no; Knowmara na ezinụlọ dị ijeri dọla na-ebi n'ụlọ ezinaụlọ ma anyị na-atụ ụtụ isi n'ụdị echiche ọchịchị onye kwuo uche ya. Naanị wepu ihe onyinye nitrogen.
Ihe ọ bụla anyị hụrụ ugbu a ndị mmadụ na-efegharị bụ ihe dị ọcha ma dabere naanị na mgbaru ọfụma echiche ndị ọkachamara Jeroen Pauw goro ọrụ na mmemme TV ndị ọzọ na-ahụ maka njikwa. Enweghị nkatọ zuru oke ma ọ bụ ntọala sayensị. Ma ọ bụrụ na nkatọ, nnyocha ahụ ga-eme ka ndị mmadụ hụ ya. Ọ bụ ihe niile gbasara obi uto, mmemme subliminal, na ndị na - eme ihe nkiri akwụ ụgwọ dị ukwuu, ma, n'okwu ọnụ, na - ejide gị n'osisi. N'uche m, ihe nitrogen chọrọ maka ndị ọrụ ugbo dabere na landjepik, ebe steeti chọrọ ime ka o sie ike maka ndị ọrụ ugbo. O siri ike nke na ụfọdụ na-efu ego na ndị agbata obi nke na-akọ ugbo nwere ike weghara ala ebe ala ndị ọzọ nwere ike ịga steeti ahụ maka ọrụ na akụrụngwa. Eziokwu ahụ bụ na oke ọsọ na-agbadata ga-eduga na ụma ijeri dollar (site na ego), nke a ga-esi nweta ego maka ihe owuwu ọhụrụ na ọrụ owuwu ihe a. Eziokwu ahụ bụ na ndị ọrụ ugbo ole na ole na-abanye na karama ahụ ga-eme ka steeti bụrụ ọgba aghara. Ndi oru ugbo a nwere ike imekorita nke oma dika ndi oru ha na ndi agbata obi ha. Ọ bụghị ihe niile gbasara gburugburu ebe obibi; ọ bụ ihe gbasara ego na iwu ndị ọzọ (gụọ: nchịkwa ndị ọzọ, steeti ndị uwe ojii). Netherlands bụ ebe nnwale maka Europe na ndị ọzọ nọ n'ụwa.
Lees gaa n'ihu ebe a
Ihe ndekọ njikọ njikọ: nytimes.com
Ndị ọrụ ugbo na-eme ngagharị iwe: ndị ọrụ ugbo na-elebara anya na ndị isi ngagharị iwe gị abụghị ndị ọrụ mkpuchi steeti
Ụmụ akwụkwọ ngosi nke ihu igwe Na Hague na-ezuru
Tags: 100%, 130, Achbịaru nso, amonia, ndi oru ugbo, CO2, agba, kacha, Nederlandse, PAS, omume, mkpesa, ọsọ, okporo ụzọ, nitrogen
Matthijs van den Brink dere, sị:
Ndi oru ugbo a kwuru na “Okpukpo ahu dara nke oma na odo odo”, ihe ndi oru ugbo kwuru, ya mere enwere ike idi otutu nitrogen. Nke na-enye echiche na enwere ike ịkarịkwa nitrogen. Ka nke a ọ bụ n'ihi acidation nke ala n'ihi amonia nke ukwuu? Ma ọ bụghị nke ukwuu nitrogen? Ma mgbe ahụ kwa ka nsị anụ nri adịghị mma. Then nweghi ihe ị ga - ekwupụta (ọ bụrụgodị na okwu ahụ ezighi ezi nitrogen)?
Ammonia n'onwe ya abụghị acidic, mana nke nkiti; ntụgharị ọ na - egbochi acid ahụ.
A kọwara okwu ahụ na isiokwu ahụ na enweghị ihe ọ bụla gbasara ihe ndị ehi nwere na mpụta ha na-abụghị nke nitrogen atọm bụ akụkụ nke amonia. Amonia bara uru ma dị mma maka osisi.
N’ezie i nwere ike ikwu na ihe ọ bụla na-ekwu ‘nke ukwuu’ adịghị mma, mana atụmatụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị yiri ka ọ na-emetụta ego na ịnweta ala (ma ọ bụ wepụ ya), yana ihe ndị a metụtara gburugburu ebe obibi dịka alibi.
Akụkọ bụ na Netherlands nwere ọtụtụ anụ ụlọ na ya mere nweekwa ọtụtụ nri na amonia amba. Ọ bụrụ na nke a ebilite na ala, osisi ndị hụrụ ala na-adịghị mma - na enweghị ike hazie oke nitrogen - na-ata ahụhụ site na ya. Osisi na-eme nke ọma na sọlfọ bara ọgaranya, dị ka ahịhịa na Net, na-enweta mmeri.
Nke ahụ bụ nkuzi gọọmentị ... ọ bụ ihe ncheta nke "acid mmiri ozuzo" nke afọ ole na ole gara aga. "Osisi hụrụ ala na-adịghị mma ...", "osisi dị n'ihe ize ndụ" .. Ee ee .. Ọzọ, anyị na-ahụ okwu nitrogen na sọlfọ bara ọgaranya. Okwu ahụ bụ nitrogen na-enweghị ihe ezighi ezi. Nitrogen na-aputa ihe n’etu dika esi gosi ya na foto dị n’isiokwu ahụ.
M na-ekwu: ọ bụ naanị ego, iwu ndị ọzọ na ijide ala
Yabụ na gọọmentị a na-agụ bụ na amonia ga-abụ ihe ọjọọ maka ụfọdụ ahịhịa n'ụdị nchekwa ụfọdụ
Ihe ịrụ ụka adịghị ya na ọ ga-abụ nke ukwuu adịghị mma, mana o yiri ka ọ bụ mbibi a na-ebibi anụ ụlọ na Netherlands. Gburugburu ebe obibi dị ka ọbịa iji nweta ego ọzọ na ndị bi na.
O nwere ike ịbụ ntakịrị ihe, mana o yiri ka ọ bụ maka iwebata na ọnọdụ maka usoro nchịkwa ọchịchị aka ike na gbasara ego.
Anyị hụkwara ụzọ ama ama nke ndị ‘sayensị sayensi na-emegide okwu nkuzi a na-enweta nkwalite ndị ọzọ na-akwado akụkọ ahụ ka ha nweta nkwalite’ n’akụkọ CO2. Ajụjụ a bụ ma nke a ọ dịkwa n ’ebe a.
Posnwe belata mmụba ammoina bụ obere ihe na-ebute mbenata oriri anụ. Kedu ka ị ga-esi lelee anụ ole mmadụ na-azụ ma rie? Site na 'ịntanetị nke ihe' (5G) na oriri traceable. Nke ahụ chọrọ sistemu ego ego nke blockchain na ihe dị ka mita amamịghe n'ụlọ (friji iji tụta ihe na-abanye, ụlọ mposi smart iji tụọ ihe na-apụ).
Nitrogenzọ "nitrogen", ya na okirikiri CO2, ya mere, ọ bụ ụzọ dị mma iji webata usoro nchịkwa ọchịchị.
Ma oburu na onye oru ugbo aputaputara uzo osiso, nke ahu bu ihe ekwesiri ịkwụsị, nihi na odigh nkwekorita 2030 zuru uwa. Na-egbochi nnwere onwe na ịbanye n'ubi dịka ohu ..
Ngwọta mara mma. Otu mgbe amalitere m azụmaahịa na zeolites ma bụrụ onye mbụ butere ihe ahụ na Europe site na ogbunigwe sitere na Turkey na Australia. O di nwute, n’otu oge nnukwu onye ahia anaghị akwụ ụgwọ ahụ, yabụ enweghị m ike ịchekwa ụlọ ọrụ ahụ. Onye nwe ọhụụ zụrụ ya na ụlọ akụ nwere ederede niile m dere n'oge ahụ ka nọ na weebụsaịtị. Nke kacha mma ugbu a bụ nde na-ekele m maka ọrụ niile ejiri ekwentị kpọọ.
Zeolite, na nke Clinoptilolite, na-enyocha amonia site na nsị, a na-enighachi ya na mmiri ịsa ahụ. EU nabatara Clinoptilolite m wetara ka ọ bụrụ mgbakwunye nri. M bụ onye izizi nke a n’ugbo anụ ụlọ na nnukwu ụlọ ọkụkọ (ịgba ọsọ).
Ngwọta ọzọ na-arụ ọrụ. Ma ndị mmadụ achọghị ngwọta, ha chọrọ ịkwatu ụlọ ọrụ ma jisie ike karịa.
Martin nkọwa gị kọwara ọtụtụ ihe, ihe niile dị na Madurodam na gburugburu ya bụ ihe a ga-eche na ọ ga-emebi luciferian.
Ọzọkwa mara na mbido ahụ malitere site na "mkpebi ikpe nitrogen" site na kansụl steeti.
Klọb nke Willen-Alexander bụ onye isi.
Ya mere, o doro anya na nke ikpe a nsogbu ga-abịa.
Ihe niile, ọkachasị ihe dị mkpa maka ụmụ nwoke na edemede ahụ, ka a na-eme ka ha zuo oke. Ya mere, enweghi uche ịbanye n’ụlọ ikpe 'n'ụlọ ikpe' ha.
Aghọtaghị m na ndị ọrụ ugbo, ụwa na-ewu ụlọ, wdg anaghị arụkọ ọrụ ọnụ? Ihe ize ndụ ahụ dịruru na òtù ndị chọrọ ihe miri emi, nke miri emi, ejirila ọtụtụ ndị mepere emepe nweta. Kedu mba. Ma ọ dabara nke ọma na anyị bi '' iwu nke iwu '.
Akwụkwọ akụkọ mgbasa ozi kachasị na Netherlands nwere ike ịmalite ugbu a na-achịkwa mmebi, ugbu a ọ na-apụtawanye ìhè (n'ihi na nhapụta maara, nnukwu data) na ndị mmadụ anaghị ewere ya.
(free ịgụ akwụkwọ na ọnọdụ nzuzo, mana ọ ka mma ịghara ịhụ na nzuzu ahụ)
Ndị mmadụ na-ekwukarị banyere nitrogen, mana ọ bụghị maka nitrogen. Aha a bụ okwu nduhie, iji gosi na ị na-ata ahụhụ!
17 November 2019 na 14: 05
" Ọkaiwu na-ahụ maka ịgba égbè Philippe Schol na akụkọ ndebe akụkọ ụgha Schiphol
Kedu otu ị ga - esi manye gọọmentị ịgbanwe mgbe ị na - eleghara ọha mmadụ anya? »
Nleta nile: 13.948.706